बाबुकाे मुख हेर्ने दुई तरिका ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:०९
आउनुस् हजुर, आज मज्जाले बुबाको मुख हेरौं । बर्षभरी ‘नो वरी’, एकदिन मायाले बेरौं ! फेसबुकमा फोटो पोस्ट्याएर आनन्द मनाऔं ! उनको चिसो मनमा मुतको न्यानो खन्याऔं ! थोरै अंश पाएको झोँकमा आफुले बुबालाई लाई गरेको गालीलाई भूलौं । थोत्रा पाप्रा भन्दै रछ्यानमा फालेका भाँडाकुँडा घरभित्र हुलौं !
यति गर्दा पनि बुबा अलिअलि रिसाउन सक्छन् । कुरैकुरामा केही तितो अनुभूतिका शब्द मिसाउन सक्छन् ! ‘आ, एकछिन त हो नि’ भन्ठान्दै, उनका कुरा सुनेर उडाउँ । आफ्नै तालमा गफको गाडी गुडाउँ ! आखिर बाबु अलिअलि दुखि भएर के बिग्रिन्छ र, यति कुरा त लोकलाई देखाउन पनि चाहिन्छ । मिठा शब्द संदेश फेससबुकमा लेखाउन पनि पाइन्छ !
यस्तो ‘पर-वृत्ति’ यत्र-तत्र छ, हामी भित्र पनि हुन सक्छ ! जहाँ छ मज्जाले खोतल्नु पर्छ, देख्नेबितिकै बदल्नु पर्छ।
आज बुबाको मुख हेर्ने दिन हो । बाहिरी आँखालेमात्र होइन, भित्री मनका आँखाले हेरौं ! बुबा अग्रज गुरु हुन्, आत्मीय प्रेमले बेरौं । जस्तो कर्म त्यस्तै फल पाईन्छ, भोली आफ्नै छोराको असल ब्यबहार चाहिन्छ। पाउनका निम्ति गुमाउनु पर्छ, तपाइँको जस्तै ब्यवहार छोराले नि गर्छ !
सबै छोराहरुमा सद्बुद्धि पलाओस्, हार्दिक शुभकामना ।